Sarkaalkii Al-Shabaab ka tirsanaa ee lagu qabtay Ceelbuur oo loo soo qaadayo Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Sarkaalkii Al-Shabaab ka tirsanaa ee lagu qabtay Ceelbuur oo loo soo qaadayo Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sarkaalkii Al-Shabaab ka tirsanaa ee lagu qabtay Ceelbuur oo loo soo qaadayo Muqdisho
By MAREEG on 12th October 2015
Wararka ka imaanaya degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo shalay lagu soo bandhigay degmadaas loo soo qaadayo magaalada Muqdisho, si loogu gacan geliyo Hey’adda Nabadsugida Qaranka.
Sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Cali Yuusuf oo loo yaqaano Cali Ganey ayaa lagu qabtay howl gal ay iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, kaasoo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ceel-Shiid oo ku dhow Ceelbuur.
Taliyaha ciidamada dowladda ee ka howl gala Bariga Galgaduud Col. Maxamed Kaahiye Caraale ayaa sheegay in ninkan uu ka tirsanaa saraakiisha ugu waa weyn ee Al-Shabaab, kana howl galayay Galgaduud, isagoo ku eedeeyay inuu dhibaatooyin ku hayay shacabka ku nool deegaano ka tirsan Gobolka.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in sharciga la marsiin doono sarkaalkan, waxaana uu ugu baaqay dhalinyarada kka bar bar dagaalamaya Shabaab inay ka soo baxaan oo ay ku soo biiraan ciidanka dowladda.
Waxaa horay u jiray saraakiil lagu qabtay Galgaduud oo loo soo gacan geliyay hey’adaha ammaanka dowladda, waxaana sarkaalkan dhowaan lagu qabtay duleedka Ceelbuur lagu wadaa in isna loo soo qaado magaalada Muqdisho.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa maalmihii u dambeeyay dhaq dhaqaaqyo ciidan ka waday degmada Ceelbuur, waxaana jiray ciidamo ka baxay Muqdisho oo ku qul qulaya halkaas, si ay ugu tallaabaan bariga gobolka Galgaduud oo Al-Shabaab ku xoogan yihiin.